ကဗျာဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းတိုရုပ်ရှင်၊ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ကဗြာဆနျ Narrative က Short Film, MARGOT, Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဝင်ရောက်လာ
ကဗြာဆနျ Narrative က Short Film, MARGOT, Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဝင်ရောက်လာ
ပေမယ့အပေါ်ဆုရဒါရိုက်တာ Camille က de Galbert ရဲ့နယူးစိတ်-Bende က Short သတ်မှတ်ပေးသည်မျက်မှောက်
နယူးယောက်, နယူးယော့ - (ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2017) - နယူးယောက်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ မီးပြတိုက်ရုပ်ရှင် ဆုရဒါရိုက်တာ Camille က de Galbert ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်စိတ်ထဲ-ကွေးတိုတောင်းသောရုပ်ရှင်၏မကြာသေးမီကထုပ်ထုတ်လုပ်မှု, MARGOT။ သူတို့ကတရားဝင်အနေနဲ့ဖြန့်ချိခဲ့ကြ Indiegogo တစ်ပြိုင်နက်နောက်ထပ်အကျိုးစီးပွားစတငျခဲ့သညျစဉ် post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှတဆင့်သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။
MARGOT သူမကသူမ၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၏အလွှာနှင့်သူမငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေသော့ခအချိန်လေးမှတဆင့် delves အဖြစ်အဖြစ်မှန်နှင့်အတူပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ရုန်းကန်နေအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး၏အတွင်းစိတ်ခရီးအောက်ပါအတိုင်း။ ဂီတ, ကခုန်နဲ့ဒီကဗျာပုံရိပ်တစ်ခုသတိထားရောစပ်, ဒီရုပ်ရှင်ကဗြာဆနျလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်၏လက်ညှိုးကိုပတ်ပတ်လည်ကလိမ်နေဖြင့်ဇာတ်ကြောင်းပုံစံမှတစ်မူထူးခြားသောချဉ်းကပ်ကြာပါတယ်။ MARGOT, မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်အခြားသူများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, တဦးတည်းရင်ဆိုင်ရပေမည်သည့်ရုန်းကန်မှုများ၏ကြားမှဘဝကိုစောင့်ရှောက်အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးဆရာနှင့်ဒါရိုက်တာ Camille က de Galbert သူအဖြစ် MARGOT ရှုမြင်ကြောင်းပြောပါတယ် "ပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတိတ်အပေါ်သို့ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အလှတရားသို့ဆင်းရန်အဘို့အကာဖိတ်ကြားချက်ကို။ "
, ဆန်းသစ် visceral နှင့်စားစရာထင်, ဇာတ်ညွှန်းကမ္ဘာတဝှမ်းဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများထံမှထောက်ခံမှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဂျရုမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ, 50 နှစ်အတွင်းအဘို့အစွန်အနုပညာရူပါရုံကိုဖြတ်တောက် furthering အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု, တစ်ခုထွန်းသစ်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံမှနေစဉ်အနည်းကိန်းဖြစ်စဉ်ကိုအသိအမှတ်ပြု la Maison Rougeပဲရစ်မှာတစ်ဦးဦးဆောင်အနုပညာအခြေခံအုတ်မြစ်, ပြင်သစ် script ကိုနောက်ကွယ်က Avant garde ဝိညာဉျကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်နယူးယောက်အမျိုးသမီးများနေ့ (NYWIFT), စက်မှုခေါင်းဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ရှေ့သို့အမျိုးသမီးတွေ propelling ထံအပ်နှံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု, MARGOT ၏အမျိုးသမီးဗဟိုပြုတန်ဖိုးများကိုချီးကျူးထောပနာနှင့်အခွန်ရုပ်ရှင်စေအားလုံး crowdfunding ပံ့ပိုးမှုများကိုနှုတ်ယူပြီးထောက်ခံမှုပူဇော်ကြ၏။
တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး feat, MARGOT ကွဲပြားခြားနားသွန်းနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတောက်ပ ensemble လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Bob Dylan ရဲ့ "တစ် Rolling Stone လိုပဲ" (Time Magazine ၏အဖြစ်ယခင်ကမ္ဘာကျော်ဂီတအနုပညာရှင်တွေများအတွက်ဇာတ်ကားအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဓါတ်ပုံပညာ, မိုက်ကယ် Belcher ၏ဒါရိုက်တာ #1 တစ်နှစ်တာ၏ဗီဒီယိုကို), ငါထူးခြားတဲ့နှင့်အနုပညာတစ်ခုခုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူတစ်ခု Indie ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ထွက်လာသအားလုံးအဘယ်သူကို၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားမျက်နှာများ, ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ "လို့ပြောပါတယ်။ ငါသည်အဦးဆုံးသောအရပ်ဌာန၌ရုပ်ရှင်စေခငျြတဘာဖြစ်လို့ MARGOT အလုပ်လုပ်ငါ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ "
Margot ကစားသူခဲမင်းသမီး Anjelica Bette Fellini ယခင်ကဘရော့ဒ်ဝေးအရှည်ဆုံးပြေးမျက်မှန်တဖျော်ဖြေ, အဆိုပါအော်ပရာ၏ Phantomနှင့်များအတွက်အမျိုးသားရေးခရီးစဉ်အပေါ်လောလောဆယ်တွင် ညစ်ပတ်ပေရေကနေသည်.
သူမသည်အစုံပေါ်နှင့် "အဖြစ်ဒါရိုက်တာ ... လူ့စိတ်ထူးခြားတဲ့ရှာဖွေရေးနှင့်အတူသူမ၏အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံး script ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အခါ, ငါထိုကဲ့သို့သော Margot, ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏ထိုကဲ့သို့သောစိတ္တဇပုံစံများကိုမကြာခဏတျရှုပျထှေးနိုငျသညျအဖြစ်မှတ်ဉာဏ်၏အောက်ဆုံးနှင့် nonlinear အချိန်အကြားဘိုအယူအဆ, သေဒဏ်စီရင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကဲ့သို့တိကျရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအဖြစ်တစ်ဦးဇာတ်ကောင် embodying ကြောင်းသိ ပရိသတ်ကို။ Camille က de Galbert နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းနှင့်စတင်ခြင်းသူမကဂီတ၏လှုပ်ရှားမှုကို အသုံးပြု. အလုပ်ဟာ delightfully ပိုင်ထိုက်သောဖြစ်စဉ်ကိုကြုံနေရနှင့်သူမ၏ဦးတည်ချက်လမ်းပြခုန်ဖြစ်လာအပေါ်သို့ငါ MARGOT lucidly သူမ၏ရူပါရုံကိုပရောဂျက်မယ်လို့မျှသံသယရှိခဲ့ပါတယ်။
MARGOT ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ဒါရိုက်တာအနေဖြင့်ဒုတိယတို မီးပြတိုက်ရုပ်ရှင်တစ်ဦးဦးဆောင်နယူးယော့အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ။ အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်မီးပြတိုက်ရုပ်ရှင် Partner, Thibaut Estellon, Zach Kislevitz တစ်ခုလွတ်လပ်သောဇာတ်ကြောင်းနှင့်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုကြေညာ။
"Camille ရဲ့ပထမဦးဆုံးအတိုရုပ်ရှင်, Simons တစ်ဦးအမှန်တကယ်ထူးခြားသောရူပါရုံကို, နှလုံးနှင့် GUTS ထံမှလာသည်ဟု visceral တစ်ခုခုပြသသည်။ သူမသည်အတွင်းအတွေ့အကြုံကနေသူမရဲ့ပုံပြင်တွေ drawing, ကခုန်နှင့်အမြင်အာရုံအနုပညာကတဆင့်ရိုက်ကူးသို့ရောက်ကြ၏။ သူမ၏ရုပ်ရှင်သူမ၏ပရိတ်သတ်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်ဘာဖြစ်လို့ဤသူကားအ; သူမကအားနည်းချက်နှင့်သူမ၏ဇာတ်လမ်းများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုမှထိခိုက်မခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအရွက်မယ့်လက်ဆောင်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးဇာတ်ကားကို Simons ကြီးမားသောအလားအလာပြကျနော်တို့လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ element တွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ပိုပြီးဂန္ထဝင်ဇာတ်ကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာဆီသို့မြှောင်သောသူမ၏ဒုတိယအတိုအပေါ်သူမ၏အတူလိုက်ပါဖို့ဂုဏ်ယူနေ, သူမ၏လက်မှတ်စတိုင် "Estellon မှတ်ချက်များကိုဖန်ဆင်း၏။
ဒါရိုက်တာဇာတ်ညွှန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်နှင့်မီးပြတိုက်နှင့်အတူအသီးအသီးဖန်တီးမှု key ကိုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဂရုတစိုက်မယ့်တစ်နှစ်နေခဲ့ရသည်။ "ငါကငါ psychoanalytic ဖြစ်စဉ်ကိုဆင်တူသည်ငါ့မှတ်ဉာဏ်မသိစိတ်တစ်ပိုင်း, သို့တူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်တစ်ခုစိတ်ခံစားမှုနှင့်ပင်ပန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့, ငါ့ psyche ကနေအများကြီးဆွဲခြင်းနှင့်ကျနော်မှတဆင့်ရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယ rehash ။ MARGOT အပေါ်ထိမိသောအဆိုပါဘာသာရပ်များသင်ဇာတ်လမ်းကိုနောက်ကွယ်ကအဓိပ္ပာယ်ကိုလေ့လာတခါ, သငျသညျအကြှနျုပျတို့စိတျ၏ယုန်တွင်းထဲသို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြပုံကိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်, ထူးဆန်းရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုပြီးနောက်ဒီလိုမီးပြတိုက်ရုပ်ရှင်အဖြစ်တည်ထောင်ထံမှလွှမ်းမိုးသောအားပေးမှုကိုရရှိထားရန်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်, နဲ့ post များနှင့်လာရန်ပွဲတော်ပြအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကျနော်တို့အခုခရီးဖြည့်စွက်ဖို့အစဉ်အဆက်ထက်ပိုထောကျပံ့လိုအပ်! "Camille enthuses ။
MARGOT လူမှုမီဒီယာထောက်ခံမှုတဲ့အတွက်မနေ့တုန်းကနှင့်၎င်း၏မှတဆင့်စပ်စုနောက်လိုက်အသိပေးစတင်နေပြီ က်ဘ်ဆိုက်, Facebook ကစာမျက်နှာနှင့် Instagram ကို. အဆိုပါရုပ်ရှင်ရဲ့ Indiegogo မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး မတ်လ 18th သန်းခေါင်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
LOGLINE: MARGOT သူမကသူမ၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၏အလွှာနှင့်သူမငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေသော့ခအချိန်လေးမှတဆင့် delves အဖြစ်အဖြစ်မှန်နှင့်အတူပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ရုန်းကန်နေအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး၏အတွင်းစိတ်ခရီးအောက်ပါအတိုင်း။ ဂီတ, ကခုန်, နှင့်ဒီကဗျာပုံရိပ်တစ်ခုသတိထားရောစပ်, ရုပ်ရှင်ကဗြာဆနျလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်၏လက်ညှိုးကိုပတ်ပတ်လည်ကလိမ်နေဖြင့်ဇာတ်ကြောင်းပုံစံမှတစ်မူထူးခြားသောချဉ်းကပ်ကြာပါတယ်။
အဆိုပါစာရေးဆရာ & ဒါရိုက်တာ Camille က de Galbert အကြောင်း:
Camille က de Galbert တစ်ဘရွတ်ကလင်းအခြေစိုက်အနုပညာရှင်သည်နှင့်ထွန်းသစ်စ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမူလကပြင်သစ်နိုင်ငံမှ။ သူမသည်ကခုန်နေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလိုက်နိုင်ရန်အတွက်နယူးယောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ပေမယ့်တစ်ဦးဒူးဒဏ်ရာသူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်ကဂီတ, လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပုံရိပ်၏သဘာဝရောစပ်သည်အတိုင်း, သူမ, ရုပ်ရှင်မှသူမ၏ဖန်တီးမှုအာရုံကိုလှည့်။ သူမ၏ထူးခြားသောအနုပညာချဉ်းကပ်ဘို့အချီးမွမ်း Camille ရဲ့ multidisciplinary အလုပ်သူမ၏စိတ်ဝိညာဉ်၏အီစိတ်ကူးများထုတ်ဖော်ပြသ, ဇွဲနှင့်ဝိညာဏ်။ သူမရဲ့အနုပညာနှင့်စမ်းသပ်ရုပ်ရှင်ပြင်သစ်, အမေရိကန်ဂျာမနီ, ဆလိုဗေးနီးနှင့်အီတလီနိုင်ငံပြတိုက်နဲ့အနုပညာရိုးအမြစ်ကိုမှာပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Camille ရဲ့ပွဲဦးထွက်ရုပ်ရှင်, Simons, 2015 အတွက်မီးပြတိုက်ရုပ်ရှင်ကထုတ်လုပ်, မိုင်ယာမီ, Malibu အပါအဝင်တိုက်ကြီးအနှံ့6အကောင်းဆုံးက Short ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆုပေးပွဲ (အနိုင်ရ နှင့်ချီကာဂို), 60 အရာရှိတဦးကရုပ်ရှင်ပွဲတော် ရွေးချယ်မှု, နှင့်အများပြည်သူလွှတ်ပေးရေးခါနီးပေါ်သည်။
ပြောင်းပြန်ပုံစံများဖြစ်ပေါ်နေသောမီဒီယာ၏အလုံးစုံတို့အဘို့လက်ထွင်းထုအကြောင်းအရာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာများနှင့်ဖန်တီးမှုများ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ကွဲပြားခြားနားစဉ်းစားရန်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီဖန်တီးမှုစိန်ခေါ်မှုလက်ခံ, အသည်းအသန်ဇာတ်လမ်းတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာဉ်မှကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ထားနှင့်အောင်မြင်သောပေမယ်အဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' မျှော်မှန်းချက်ကျော်ဖြတ်နေကြသည်သာကြောင်းဖြေရှင်းချက်စိတ်ကြိုက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတဝှမ်းဦးဆောင်ကြော်ငြာအေဂျင်စီများ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် non-profit အဖွဲ့အစည်းအချို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ပြောင်းပြန်နှစ်ဦးက New သင်္ကေတဖြင့်၎င်း၏တန်းစီဇယားတိုးချဲ့: ကင်မ် Jacobsen & Bradley Tangonan - အောက်တိုဘာလ 11, 2018
မီးပြတိုက်ရုပ်ရှင် Rebrands နှင့်ပြောင်းပြန်အဖြစ်ရှေ့ကိုတွန်း - ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2017
Susie Shuttleworth အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်မီးပြတိုက်ရုပ်ရှင်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် - နိုဝင်ဘာလ 29, 2017
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ရုပ်ရှင်ပညာ ပေမယ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှု တိုတောင်းသောရုပ်ရှင် တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို 2017-03-01
ယခင်: YouTubeTV နှင့်အတူတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ဖွာထဲသို့ Google ကခုန်
နောက်တစ်ခု: Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှု, LLC, NAB 2017 မှာဟန်ပြ arrowFX